Shirkadda GOLIS oo 17 Kun oo Dolar Ugu Deeqay Jaamacada Sanaag University | Somaliland.Org
Shirkadda GOLIS oo 17 Kun oo Dolar Ugu Deeqay Jaamacada Sanaag University
August 31, 2012	Ceerigaabo (Somaliland.Org)- Shirkadda isgaadhsiinta ee GOLIS ayaa lacag dhan 17 kun oo dolar ugu deeqday dhisme cusub oo lagu kordhin doono jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag.
Sida uu ku soo waramay Weriye Maxamuud Maxmaed Xasan (Saraaf), Xafladii gudoonsiinta lacagtan oo lagu qabtay hoolka shirarka jaamacada ayaa waxa ka soo qayb galay Gudoomiyaha Gobolka Sanaag masuuliyiinta shirkada golis ee gobolka Sanaag iyo maamulka jaamacada iyo marti sharaf kale.
Waxaana ugu horeynba madashaasi ka hadlay Gudoomiyaha Shirkada isgaadhsiinta GOLIS ee Gobolka Sanaag Siyaasi C/laahi Axmed Daamur oo faahfaahin ka bixiyey qorsha lacagta ay shirkadoodu ugu talo galeen.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag Aadan Diiriye Cigaal ayaa ayaa isaguna shirkada isgaadhsiinta ee GOLIS uga mahad celiyey lacagtan ay jaamacada ugu deeqeen iyo doorka wax ku oolka ah ee shirkadaasi ay had iyo jeer kaga qayb qaadato guud ahaanba horumarinta gobolka Sanaag,
Hormuudka jaamacada Sanaag Prof. Xasan Ibraahim Xasan (Bulsho) oo isna halkaasi ka hadlay ayaa dhankiisa si weyn uga mahad celiyey deeqdan wax ku oolka ah iyo sida ay wax uga tari doonto balaadhinta dhismayaasha jaamacada. Prof. Xasan waxa uu ka waramay xaalada jaamacada iyo heerka ay xiligan marayso.
Badhasaabka Gobolka Sanaag Aadan Diiriye Cigaal ayaa gebagebadii munaasibadaana halkaasi ku Dhagax Dhigay Dhismihii Cusubaa ee lacagtaasi lagu fulin lahaa.
Jaamacada Sanaag University oo haatan maraysa heerkii ugu wanaagsanaa islamarkaana dhismayaal dhawr ahi ay kasocdaan ayaa waxaa wax uga barta boqolaal arday oo kaga negaaday tiigtii waxbarsho ee ay u tegi jireen deegaamada durugsan.
Previous PostDahabshiil Group oo loo Qiray in Kaalinta ugu Ballaadhan ka Qaatay Hirgelinta Carwadii Hay’adahaNext PostDegmada Laas-qoray oo si weyn loogu soo dhaweeyay Masuuliyiinta cusub ee degmadaasi	Blog